धार्मिक हिंसाको बीउ रोपियो
काठमाडौं । युरोपियन युनियनले निर्वाचन पर्यवेक्षण रिपोर्टका नाममा खसआर्य विरुद्ध जनजाति उफार्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो र प्रधानमन्त्रीले समेत निन्दा गरेको त्यो रिपोर्ट क्रिश्चियन धर्म अँगालेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले स्वीकार गरे ।
त्यसपछि गृहमन्त्रीले देशमा धार्मिक युद्ध गराउने षडयन्त्र भइरहेको, आन्तरिक र बाह्य चार सुरक्षा चुनौती रहेको खुलासा गरे ।
यसअघि चैत ८ गते मंगोल नेशनल आर्मी (एनएमएनओ)को नाममा पर्चा छरियो र भनियो– सन २०२५ सम्ममा नेपाललाई इसाई राज्य बनाइने छ भनेर हिन्दुहरुलाई धम्क्याइयो ।
यसअघि बेलायतको गार्जियन पत्रिकाले लेख्यो– नेपालमा पैसा दिएर धर्मपरिवर्तन गराइदैछ । नेपाल धर्मपरिवर्तन हुनसक्ने गरीव मुलुक हो ।
यो के हो ? हिन्दुलाई किन धम्की दिइयो ? नेपालाई क्रिश्चियन मुलुक बनाइने छ भन्ने पर्चावाजी के हो ? भनेर हिन्दुहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए, प्रधानमन्त्रीले केही जवाफ नदिए पनि गृहमन्त्रीसँग यस मामिलामा सतर्क रहन भनेका थिए ।
यी श्रृंखलाबद्ध निरन्रतामा गत शनिवारको राति २ बजे सुया सन्त आचार्य श्रीनिवासमाथि गोली प्रहार भयो । उनको विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ । गोली के चल्यो, वीरगञ्जदेखि नेपालैभरिका हिन्दुहरु सडकमा निस्केर हिन्दुत्वमाथिको आक्रमण भन्दै विरोध गरिरहेछन् ।
प्रहरी रिपोर्ट भन्छ– घटनास्थलमा मंगोल नेशनल आर्मीको पर्चा भेटिएको छ । हिन्दुहरुलाई खबरदार लेखिएको छ । पर्चामा एनएमएनओको किटानी छैन र गोपाल गुरुङ जो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका प्रमुख थिए, अहिले बुद्धलाल मेचे छन्, उनले आफ्नो संलग्नता नभएको र आफ्नो पार्टीलाइ बदनाम गराइएको दावी गरेका छन् ।
यद्यपि यो पार्टीको जन्मजात नीति भनेको बुद्ध मान्ने, गैरहिन्दु मूलवासी मंगोलहरुको पार्टी हो भन्दै सिद्धान्तका रुपमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनरपेक्षतालाई स्वीकार गर्दै आएको छ । धर्मनिरपेक्षता माने पनि अहिले यो पार्टीले इसाई प्रचारक यो पार्टी होइन भनेर टकटकिएको छ । सद्भाव हाम्रो पार्टीको मूल नीति भनेको छ ।
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेन (आर्मी) का नाममा हिन्दुवादीलाई थर्काउने र गोली हानेर मार्ने ज्यानमारा काम कसले गर्‍यो त ? यसबारेमा रामवहादुर थापाको गृह मन्त्रालयले सुइँको सम्म पाएको अवस्था छैन ।
चैत ८ मा जारी पर्चा डेविट तामाङको नाममा आएकोले उनलाई पक्राउ गर्न र कारवाहीको दायरामा ल्याउन एनएमएनओले माँग गरेको छ । भनिन्छ, एनएमएनओमा दुई गुट छन् र एक गुट इसाई प्रचारक छन् ।
हिन्दुलाई भड्काएर नेपालमा धार्मिक हिंसा मच्चाउने रणनीति देशी विदेशीको रहेको छ । यसमा इसाईको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिन्छ ।
०६३ साल यता बनेका सबै चर्च भत्काउने अभिव्यक्ति दिएकै कारण विराटनगरमा गुरु श्रीनिवासमाथि गोली हानिएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ तर कसले गोली हान्यो, यसको अनुसन्धान जारी
छ भन्छ प्रहरी । अव हेर्ने छ, इसाईले हिन्दुमाथि हिन्दुको आक्रमण भनेर गरेको प्रचार सही हो कि नेपालमा धार्मिक हिंसा भड्काउनेहरुको यसमा हात छ, गृहको अनुसन्धानले बताउला ।
यस गोली काण्ड र धार्मिक हिंसाको बीउ छर्ने काममा भारतीय रअसमेत लागेको आशंका गरिदैछ ।
श्रीनिवास विराटनगरको जतुवामा सप्ताह महापुराणको लागि गएका थिए । यनी गौरक्षा अभियानका अभियन्ता बालसन्त हुन् । वाचन शिरोमणि नारायण पोखरेल, मदन भण्डारी, दरवार हत्याकाण्डपछिको यो जघन्य अपराध मानिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालभरि लेखिएका छन्– हिन्दुमाथिको आक्रमण नेपालमा धार्मिक रक्तपात गराउने खतरा हो ।